ဝန်မပါလည်း​ပွဲမြဖစ်၊​ဝန်ပါလည်း​ပွဲစိတ်ညစ် | ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား
at Friday, July 01, 2011 –2မှတ်ချက်ေလးေတွ
ဝန်မပါလည်း​ ပွဲမြဖစ်၊​ ဝန်ပါလည်း​ ပွဲစိတ်ညစ် ။ ။ ြမန်မာဇာတ်သဘင်၌ဝန်ြကီး​ေလး​ပါး​မ​ထွက်​ဘဲ ြပည်တည်၍မရ၊​ ြပည်တည်ရာ၌ ဝန်တို့​က အချိန်ြကာြမင့်​စွာ​ေြပာဆို​ေနပါကလည်း​ ပွဲြကည့်​သူ​တို့​ ြငီး​ေငွ့​ြကရသည်။
"ဝန်များ​ လွှတ်တက်ြကသည်။ ဤအခန်း​သည်…ကာလသား​သမီး​တို့​ကား​ ထီး​နန်း​​ကို မမီလိုက်ြက​ေတာ့​သြဖင့်​ ထိုအခန်း​ကို အလွန်စက်ဆုပ်ြက၏။ … ဤသို့​ြဖင့်​ လူမုန်း​ေသာ​အခန်း​ ြဖစ်လာ​ေတာ့​ရာ ဝန်မပါလည်း​ ပွဲမြဖစ်၊​ ဝန်ပါလည်း​ ပွဲစိတ်ညစ်ဟူ​ေသာ စကား​ပံုတို့​ ​ေပါ်လာ​ရ​ေလ​​ေတာ့​သည်။ " -ခန့်​ လင်ဂီ။
"ဝန်မပါလည်း​ပွဲမြဖစ်၊​ ဝန်ပါြပန်​ေတာ့​လည်း​ပွဲစိတ်ညစ်ဟု ဇာတ်ပွဲ​သဘင်​ေလာက၌ စကား​ပံုတစ်ခုရှိသည်။ " သာသနာ့​သက်။
Oh, what we observe? Same supreme outcome referring to this topic I utilized for article submit.
this is very detailed and informational post. Thanksalot..... Picsart videoder instapic
သမီး​မိန်း​မ ေမွး​ြပန်ရ၊​ေမာင်ဖား​မိဘ အရှက်ရ